Iwu akụrụngwa | Eindhoven & Amsterdam
Ngwongwo ọgụgụ isi (IP)
Iji gbochie ndị ọzọ iji ọrụ gị, iwu akụrụngwa nke ọgụgụ isi na-enye ohere iji chebe echiche gị mepụtara na echiche okike. Nke a pụtara na enwere ike iji ikike gị rụọ ọrụ gị naanị. Nke a dị ezigbo mkpa na ọha mmadụ na-agbanwe ngwa ngwa na mmepe. You ga-achọ ịmatakwu gbasara iwu akụrụngwa nke ọgụgụ isi?
YOÙ B A OZI?
Chekwaa uwa gi
Iwu ikike ọgụgụ isi
Iji gbochie ndị ọzọ iji ọrụ gị, iwu akụrụngwa nke ọgụgụ isi na-enye ohere iji chebe echiche gị mepụtara na echiche okike. Nke a pụtara na enwere ike iji ikike gị rụọ ọrụ gị naanị. Nke a dị ezigbo mkpa na ọha mmadụ na-agbanwe ngwa ngwa na mmepe.
> Arịa ọgụgụ isi
> Ikike dị iche iche
You ga-achọ ịmatakwu gbasara iwu akụrụngwa nke ọgụgụ isi? Ndị ọkachamara na Law & More nwere ike inye gị nkwado iwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe echiche gị ma ọ bụ ihe okike gị. Ọ bụrụ na ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enyere gị aka ịdebanye aha nke ọgụgụ isi na anyị ga-eme ihe maka ọdịmma gị megide ndị na-emebi iwu ọ bụla. Ihe omuma anyi na ala nke iwu amamihe ihe
• Patent na akwụkwọ ikike;
• Aha ahia
ọ bụ nsogbu ndị ahịa. ”
Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ihe, onye nrụpụta ihe, onye nrụpụta ma ọ bụ onye edemede, ị nwere ike kpuchido ọrụ gị site n'iwu iwu ọgụgụ isi. Iwu ihe gbasara ọgụgụ isi na - eme ka ndị ọzọ ghara iji ihe okike gị belụsọ ma ị nyere gị ikike iji mee ya. Nke a na - enye gị ohere iji weghachite ego gị na mmepe nke ngwaahịa. Iji nweta nchebe, ọ dị mkpa na ị nwere echiche zuru oke. Otu echiche ezughi oke, ebe enwere ike idozi ya n'ọtụtụ ụzọ. Mgbe i nwere echiche amamịghe, ndị ọka iwu anyị nwere ike ịdekọ ihe ọgụgụ isi gị n'ụzọ dị iche iche. Enwere ụdị iwu ihe ọgụgụ dị iche iche, enwere ike iji ya iche ma ọ bụ jikọtara.
Ikike ikike ọgụgụ isi
Ọka iwu nwebisiinka
You nwere onye nwere akwụkwọ, ihe nkiri, egwu, eserese, foto ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ? Kpọtụrụ anyị
You chọrọ ịdebanye aha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị? Anyị nwere ike inyere gị aka
Tinye maka patent
Nwere onye mepụtara ihe? Hazie patent
Anyị na-enyere gị aka ịdebanye aha gị na ahia
Ikike dị iche iche
E nwere ụdị dị iche iche nke iwu ọgụgụ ọgụgụ ihe, ụdị, akwara na oge nke na-adịgasị iche site n'otu ihe onwunwe gaa na nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịdebanye ikike ikike ọgụgụ isi n'otu oge. Law & Moreamamịghe nke iwu amamihe ihe gụnyere gụnyere nwebisiinka, akara nwebisiinka, ikikere na ikikere na aha azụmaahịa. Site na ịkpọtụrụ Law & More ị nwere ike jụọ maka enwere ike.
Ọdịnaya nwebiisinka na-echebe ọrụ nke Onye Okike ma nye Onye Okike ikike ibipụta, mepụta ma chebe ọrụ ya site na ndị ọzọ n'ụzọ na-adịghị mma. Okwu 'ọrụ' gunyere akwụkwọ, ihe nkiri, egwu, eserese, ese foto na ihe osise. Agbanyeghị na ekwesighi itinye akwụkwọ maka nwebiisinka, dịka ọ na-eme na akpaghị aka mgbe emepụtara ọrụ, ọ dị mma ka edekọtara nwebiisinka ahụ. Iji guzosie ike, I nwere ike gosi mgbe niile na ọrụ ahụ dị n’ụfọdụ ụbọchị. Ọ ga-amasị gị ịdebanye aha gị maka ikike gị wee chebe ọrụ gị megide ndị na-emebi ikike nwebiisinka gị? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu na Law & More.
Iwu ahia ahia mere ka itinye aha ahia gi aka, ka onye obula ghara iji aha gi n’enweghi ikike. A ga-egosizigharị edenyere ahia edetu ma ọ bụrụ na i debara aha ụghalaahịa ahụ n'akwụkwọ ụghalaahịa. Law & MoreNdị ọka iwu ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka na nke a. Ọ bụrụ n ’edenyere aha gị ma jiri ya mee ihe na-enweghị ikike gị, nke a bụ emebi iwu. Nke gi Law & More Onye ọka iwu ga-enyere gị aka ịme ihe megide ndị na-emebi iwu.
Patent na patenti
Ozugbo ị mepụtara ihe okike, ngwaahịa ọrụ ma ọ bụ usoro, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka patent. Patentifenti ahụ na - ejide n'aka na ịnwere ikike iji aka gị mepụta, ngwaahịa ma ọ bụ usoro aka gị. Iji tinye akwụkwọ maka patent, ị ga-emerịrị ihe anọ achọrọ:
• Ọ ga-abụrịrị ihe mepụtara;
• Ihe e mepụtara ga-abụrịrị ihe ọhụrụ;
• A ga-enwerịrị ihe iji mepụta ihe. Nke a pụtara na ihe ị mepụtara ga-enwerịrị ihe ọhụụ ọ bụghị obere mgbanwe maka ngwaahịa dị adị;
• Ihe ị mepụtara ga-adịrịrị n'ọrụ ọrụ.
Law & More na-enyocha na i tozuru ihe niile achọrọ ma nyere gị aka itinye akwụkwọ maka patent.
Aha ahia obula aha nke ulo oru ha na eme. Aha ahia nwere ike idi otua aha ya bu ahia, ma obughi otu a ka odi. Enwere ike ichebe aha ahia site na ịdenye aha ha na berlọ Azụmaahịa. Anaghị anabata ndị asọmpi iji aha azụmahịa gị. Anabataghị aha aha azumahia nke na ahare gi na aha ahia gi. Agbanyeghị, nchebe a nwere oke oke na mpaghara. Companieslọ ọrụ ụlọ ọrụ dị na mpaghara ọzọ nwere ike iji otu aha ma ọ bụ otu. Agbanyeghị, enwere ike inye aha azụmaahịa ọzọ site na ịdenye aha ya dịka ụghalaahịa. Ndị ọka iwu na Law & More ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ banyere ohere ị nwere.
Are na-achọ ọka iwu ihe gbasara ọgụgụ isi? Biko kpọtụrụ Law & More. Anyị nwere ike inyere gị aka ịtọlite ​​ikike gị ma kwado gị mgbe ị na-emebi ikike gị.